Xog-hayaha guud ee QM oo fariin u diray baarlamaanka cusub ee Soomaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Xog-hayaha guud ee QM oo fariin u diray baarlamaanka cusub ee Soomaliya
Xog-hayaha guud ee QM oo fariin u diray baarlamaanka cusub ee Soomaliya
Xoghayaha guud ee QM Ban Ki-Moon ayaa soo dhaweeyey dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamanka federaalka Soomaaliya, isaga oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeey guusha Taariikhiga ah.
Xog-hayaha ayaa ku booriyay baarlamanka cusub in ay sii wadaan dardarta ay Somalia ku socoto ayaga oo dhameystiraya hanaanka doorashooyinka oo ay doortaan afhayeenada labada aqal iyo madaxweynaha dalka,
“Waa in uu wax ka qabtaan baarlamaanka arrimaha sharciga ee muhiimka ah oo ay ku jirto sameynta dastuur joogto ah oo Soomaaliya ay yeelato, kaasi oo loogu daneynayo dadka Soomaaliyeed” ayuu yiri Ban Ki-Moon.
Xog-hayaha guud ee QM, Ban ki moon, ayaa sidoo kale ugu baaqay mas’uuliyiinta Soomaaliya in ay buuxiyaan dhammaan kuraasta ka harsan baarlamanka, ayaga oo xaqiijinaya in kuraasta loogu talo-galay haweenka ay buuxiyaan oo kaliya haween.
Waxaa uu carabka ku adkeeyay in sharci darro kasta, xadgudub iyo wax isdaba marin oo ay soo weriyaan guddiyada doorashada ee heer federal ama heer gobol si buxuda wax looga qabto si loo ilaaliyo sax ahaanshaha hanaanka doorashada.
Baarlamaankan 10aad ayaa waxaa hor yaala howlo culus oo la xiriira dhinaca sharci dajinta, gaar ahaan dajinta hab raaca doorashada hogaanka sare ee Soomaaliya.
Previous articleMHQ, oo dib u dhigay 18-kii kursi ee ay ku kordhiyeen Aqalka Sare
Next articleDaawo: Ciidamo ka tirsan booliska AMISOM, oo bilado la gudoon-siiyay